ANISE IYO CUMIN: WAA MAXAY FARQIGA U DHEXEEYA DHIRTA, SIDA LOO KALA SAARO NOOCA IYO DHADHANKA - ANISE
Anisi iyo cumin - dhir udgoon oo leh noocyo kala duwan oo ka mid ah codsiyada warshadaha cuntada. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa bahalka uu ka duwan yahay iyo waxa astaamahooda ah, sii akhri qodobka.
Qeexida iyo sifooyinka dhirta
Qumman iyo cirifka ayaa muddo dheer lagu beeray nin, iyada oo ay ugu wacan tahay wax aan qabyo ahayn ee beerista iyaga oo si sahlan loo daryeelo.
Kobcinta dhirta ku lug leh helitaanka dhir udgoon, taas oo lagu daro suxuuno kala duwan, oo loo isticmaalo daawooyinka dhaqameedka iyo alaabooyinka qurxinta. Tilmaamaha botanical iyo sifooyinka guud ee dalagyada ayaa laga heli karaa hoos.
Bariisku waa wakiil ka mid ah dhirta cagaaran ee sannadlaha ah, kuwaas oo lagu beeray heer aad u ballaadhan oo ah cuntada iyo daawada dawooyinka. Canuggu wuxuu leeyahay qooyska Umbrella iyo fasalka dhirta dicotyled.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan dabka iyo qaababka codsiga.
Warshadu waxay gaartaa dhererkeedu yahay 50-60 cm, caleemaha waa dhuuban, wax yar ka dib, jeexjeexan qaybta sare. Xuduudaha waa dhuuban yahay, waxay u eg tahay ul aan lahayn laanta. Caleemaha hoose waxay ka soo baxaan nidaamka asaasiga ah, waxay ku yaallaan petioles dheer oo leh qaab wareegsan. Xagga sare ee warshadda, taarikada caleenta waa qulqulayaan, waxay leeyihiin gadaal muuqaal ah.
Inflorescences waxay qabataa ilaa 17 ubax, ubaxa naftooda waxaa lagu soo bandhigaa qaab dalladaha leh ballaciisu yahay 7 cm. Miro waa ukunta-qaabeeya, oo si qunyar ah loo kabo. Seeds waxay gaartaa 5 mm, midabkoodu waa midab.
Waxyaabaha kiimikada ah 100 g ee wax soo saarka:
borotiinka - 17.6 g;
dufanka - 15.9 g;
carbohydrates - 35.4 g;
dheef-shiidka - 14.6 g
Waxyaabaha macdanta ka sameysanaya basbaaska:
Waxyaabaha Fitamiin ah:
Qumaati waa dhirta cawska, oo ah wakiil ka tirsan qoyska Dalladda. Waxaa lagu koray aagagga xaaladaha cimilada ee dhexdhexaadka ah. Xuduudaha ayaa si fiican u horumarsan, fareeshka, oo ay ugu mahadcelinayso dhismaha ismaamul-qaabeeya, waxay qaadataa 20 cm oo qoto dheer.
Waa muhiim! Marka la beero dumin, waa inaadan filanin goosashada dhakhso ah ee abuurka, sababtoo ah bahalka isbiriqaadka ah iyo midhaha miraha, laga bilaabo sannadka labaad ee nolosha.
Caleemaha waxay leeyihiin qaab qaabeysan, waxaa loo qaabeeyey si la mid ah on biqil, ka fujiyay qaybta hoose ee stem, sare ee ay gaaban. Sanadka ugu horeeya ee koritaanka dhaqanka waxaa la aasaasay rosette basal ah basal, sanadka labaad waa abuurista caleemo, kuwaas oo noqon kara mid fudud ama nodular, gudaha ay yihiin meel bannaan.
Cumin Caadiga ah ee ubaxa ah waxay leeyihiin 5 tufaax, rinji cad. Inflorescences waxaa lagu soo bandhigaa qaab dallad ah. Miro waxay bislaadaan bisha Agoosto. Noocyada ugu caansan ee dhirbaaxadu waa madow iyo kuwa caadiga ah. Mugdi madow
borotiinka - 19.8 g;
dufanka 14.6 g;
carbohydrate -11.9 g;
caanaha nafaqada - 38 g
Macdanta waxaa ka mid ah:
Akhriso, marka laga reebo caraway waa faa'iido leh.
Waa maxay farqiga u dhexeeya dabka iyo macdanta
Waxaa jira caqiido caan ah oo ah cumin iyo dubidda waa mid isku mid ah, sababtoo ah dhirta ayaa ka mid ah qoyska, waxaa badanaa la barbardhigaa fennel. Laakiin sida ra'yi waa khalad, iyo kala soocista dhirta by dhadhan, caraf udgoon iyo botanical tilmaantaa tan.
Dadka tan iyo wakhtiyadii hore waxay ku hawlan yihiin beerista dhirta. Ku saabsan sifooyinka bogsashada ee dabka ayaa waxaa laga yaqaan diiwaanka Hippocrates, sidaa daraadeed, malaha, faafitaanka dhirta ay bilaabeen Mediterranean.
Cumin sidoo kale waa dhaqanka ugu da'da weyn ee ay dadku ku dhaqmaan. Spice wuxuu bilaabay inuu ka faafiyo Eurasia.
Qumaatu waa dal dalagga qoyan, oo awood u leh inuu u dulqaado miraha yar yar heerkulka illaa -5 ° C. Wixii beerashada ee dhirta ku habboon gobollada leh cimilada diiran.
Ma taqaanaa? Si aad u sameysid macmacaan, waa lagama maarmaan in la diiriyo.
Anise waa geedka kulaylka jecel, sidaas darteed waxaa la koray gobollada koonfureed, taas oo kala soocaysa dhirbaaxada.
Qummani waxay leedahay dhadhan qadhaadh ah oo leh dareen ah oo ka mid ah foosha. Anise waxay leedahay dhadhan macaan oo u egtahay fennel.
Kalluunku wuxuu leeyahay boodh aad u baayacmushtey, iyo cumin waxay leedahay dhadhan macaan, dhadhan.
Midhaha miraha dhirta waxaa lagu kala saari karaa:
Kiriimadu waxay gaartaa ilaa 5 mm dhererka, qaabkani waa ochow, midabkiisu waa midab ama midab khafiif ah.
Suminta - illaa 7 mm dhererka, abuurka gabbaldayaha - bareeska, wax yar oo cureg ah, bunal ama madow, iyadoo ku xiran kala duwanaanta.
Siyaabaha loo isticmaalo
Xannuunadu waxay leeyihiin codsiyo badan oo kala duwan, waxaa loo isticmaalaa:
Spice waxaa loo isticmaalaa warshadaha cuntada, halkaas oo qaybta cagaaran ee warshadda iyo abuurka loo isticmaalo. Thanks to arooska qurux badan, xawaashka waxaa lagu daraa suxuunta kala duwan.
Isticmaalka dhir udugga ee karinta:
Hilibka dhirta waxaa lagu daraa salad cusub iyo maraq cusub.
Xilligaas si wanaagsan ayaa loo buuxiyaa waxyaabaha caanaha iyo suugada hilibka.
Suxuunta kalluunka iyo hilibka ayaa si fiican loogu daraa dabka, taas oo qayb ka ah xawaashka ka yimaada qasacad-qamiis.
Marka lagu daro mashiinka loo yaqaan 'coriander' waxaa lagu daraa alaabada wax lagu dubo.
Waxyaabaha sarreeya ee retinol iyo potassium ayaa u oggolaanaya isticmaalka dhirta ee soo saaridda maskaxda dib u soo kabashada. Waxyaabaha ka soo baxa dabka, taas oo qayb ka ah maaskarada, waxay galinaysaa qoto dheer ee epithelium waxayna yareyneysaa codka muruqyada muruqyada, taas oo, markaa, waxay ka caawisaa, in la baabi'iyo lakabyada dabiiciga ah.
Riboflavin iyo thiamine ee ka kooban qayb ka mid ah dhirta ester waxay yeelan kartaa saameyn xoog leh timaha. Waxaad soo celin kartaa iftiinka iyo jilicsanaanta timaha, haddii aad ku darto 3 dhibcood oo ah saliid lagama maarmaanka ah ee dhirta ku jirta weel shaambo ah.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan guryaha faa'iidada leh iyo ka hortagga dabka.
Miraha dabiiciga ah waxaa loo tixgeliyaa daawada dabiiciga ah ee dabiiciga ah.Sidaa darteed, isticmaalka qadarka 3 g maalintii ayaa kaa caawin doonta inaad ka takhalusto niyad-jabka iyo burburinta nerwada. Sababtoo ah joogitaanka fiitamiin B, magnesium iyo birta, isticmaalka xawaashka cuntooyinka maalinlaha ah waxay ka caawineysaa in ay caadi noqoto geeddi-socodka dheef-shiid kiimikaadka jirka, hagaajinta isbeddelka mindhicirka iyo baabi'inta meteorismka.
Laakiin markay cunayaan dhir udun, waxaa jira waxyaabo ka hortag ah:
dulqaad la'aanta shakhsiyadeed ee dhirta;
ka sii daridda cudurrada caloosha.
Bariis waxaa loo isticmaalaa farshaxanka culus waxaana ka mid ah:
suugada iyo marinades ee hilibka iyo kalluunka;
waa mid lagu daro farmaajo.
Bariisku waa wax aan lagama maarmaanka u ah dumarka. Waad ku mahadsantahay fitamiinada E iyo B, haweenku waxay illoobi karaan ciddiyaha iyo timaha, iyo kuwa ugu muhiimsan, waxay bedelaan caadada caadada iyo waxay ka tirtiraan xanuunada aan loo baahnayn ee ku dhaca cudurrada premenstrual syndrome.
Baadhisku wuxuu awoodaa in uu kordhiyo heerarka dhiigga ee dhiigga, iyo sidoo kale ascorbic acid, taas oo qayb ka ah, kor u qaadida difaaca iyo horumarinta degdegga ah ee ka soo kabashada hargabka.
Saliid, ka samaysan qumaati, waa qayb ka mid ah qurxinta alaabta lagu daboolo maqaarka iyo timaha. Wadarta 20 g oo saliid ah oo lagu daro kareemka caadiga ah ayaa ka caawiya dib u nooleynta iyo nadiifi maqaarka.
Xasaasiyadaha isticmaalka dhirta:
muddada ilmo dhasha, oo ay ugu wacan tahay halista dhicin;
neefta ayaa ka horjoogsanaysa isticmaalka qumanka sababtoo ah khatarta ah in la neefsado inta lagu jiro qufaca;
Waa muhiim! Cunto qaadasho maalinle ah oo cunto ah oo qiyaas ahaan 3 g ah ayaa keeneysa hoos u dhaca heerarka kolesteroolka waxayna ka hortagtaa sameynta xinjir dhiig oo ku jira maraakiibta.
Waa qalad in la aamino in macdanta iyo macdanta ay yihiin isla dhaqanka, sababtoo ah waxay si buuxda uga duwan yihiin muuqaalka, urta iyo dhadhanka. Isku midka kaliya ee dhirta ayaa ah in ay aad u jecel yihiin cuntada iyo sayniska qurxinta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Anise 2019